डा. गोविन्द केसीको अनशन जारी - Naya Patrika
डा. गोविन्द केसीको अनशन जारी
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २८ पुस | पुष २८, २०७४
प्रमुख माग : प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र डिनमा डा. अग्रवालको पुनर्वहाली
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनशन जारी राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र एसएलसीको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिई केसीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरेसँगै बिहीबार उनले अनशन तोड्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, केसीले बिहीबार आफू निकटस्थहरूसँग छलफल गरेपछि अनशन जारी राख्ने निर्णय लिएको उनका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले बताए ।
पुराना मागहरूबारे सरकारलाई झकझक्याउँदै केसीले मुख्य दुई नयाँ माग राखी अनशन लम्ब्याएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र आइओएमका डिन डा. जगदीश अग्रवालको पुनर्वहाली नभएसम्म आफ्नो अनशन जारी रहने उनको भनाइ छ ।
डा. केसीले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियान जारी रहेको बताएका छन् । ‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियानअन्तर्गत म सत्याग्रहमा रहेको कुरा विदितै छ । सत्याग्रहको क्रममा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा लगाएर मलाई गिरफ्तार गरी अदालतमा उपस्थित गराई बयान गराइएको र मुद्दाको कारबाही सुरु गरिएको पनि विदितै छ,’ बिहीबार साँझ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका प्रमाणपत्र छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।
केसीले अदालतप्रतिको सम्मान र निष्ठा सधैँ उच्च रहेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको सम्बन्धमा आफूले उठाएका प्रश्नलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिई उनलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा राखेकोमा उनले प्रशंसा गरेका छन् ।
‘न्यायिक छानबिनपछि सत्यतथ्य निर्णय हुने कुरामा म विश्वस्त छु,’ केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘पराजुलीको आधारभूत योग्यता र नैतिकतामाथि यस्तो गम्भीर प्रश्न उठेको र त्यसमाथिको छानबिन न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा उनी कुनै पनि अवस्थामा अब देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न योग्य छैनन् ।’
केसी डिन बने हामी सहयोग गर्छाैँ : शर्मा
आइओएमका पूर्वडिन प्रा.डा. शशि शर्माले अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन छाडेर डिन बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नै साथी पटकपटक डिन भएन भनेर अनशन बसेको राम्रो नभएको भन्दै सबै चिकित्सकको सहयोगमा आइओएमको नेतृत्व लिन आग्रह गरेका हुन् । ‘हामी उनले जस्तो रुवाबासी गर्दैनौँ,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उनलाई डिन मान्न सबै विशेषज्ञ चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी तयार छौँ ।’
‘अबको आन्दोलन केपी ओलीविरुद्ध’
डा. केसी पक्षधरले अबको आन्दोलन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकेन्द्रित हुने बताएका छन् । बिहीबार माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध सभामा केसीसमर्थकले एमाले माफियाको पार्टी भएको आरोप लगाए । स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने क्रममा बुधबार ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग ‘निर्वाचन आयोगलाई कानुनी असहजता भए डा. गोविन्द केसीलाई सोध्नु’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि उनका समर्थक आक्रोशित भएका हुन् । केसीका सहयोगी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले एमाले माफियाको पार्टी भएको भन्दै ओलीले नैतिकताका आधारमा पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
बिहीबार अनशन तोड्ने कि जारी राख्ने भन्ने विषयमा बिहान साढे ७ बजे डा. केसीले सहयोगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा र डिनमा डा. जगदीश अग्रवालको पुनर्वहाली नभएसम्म अनशन जारी राख्ने निर्णय भएको केसीका सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले बताए । छलफलपछि केसीले ३० मिनेट एमडीका विद्यार्थीलाई पढाए । त्यसपछि अनशनस्थलमा आएर दिनभर आराम गरे । लामो समय पढाएका कारण केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनका सहयोगीका अनुसार केसीको शरीरका मसल दुख्न थालेका छन् । उनी कोहीसँग बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुटुको धड्कन बढेको, छाती दुखेको र ब्लडप्रेसर कम भएको छ ।